निद्रामा वीर्य स्खलन किन हुन्छ ? यसले स्वास्थ्यमा असर र सही उपचार बारे जानौं « News of Nepal
निद्रामा वीर्य स्खलन किन हुन्छ ? यसले स्वास्थ्यमा असर र सही उपचार बारे जानौं
पहिले सपना र यौनका सम्बन्धमा केही चर्चा गरौं । निदाइरहेका बेला एकपछि अर्को चित्र, विचार, भावना एवं संवेदना अचेतन रूपमै मस्तिष्कमा आउनु सपना देख्नु हो । मानव इतिहासमा धेरै प्रयास भए पनि कुनै व्यक्तिले किन कुनै किसिमको सपना देख्छ र त्यसको अर्थ के हुन्छ राम्रोसँग बुझ्न सकिएको छैन । सपना विशेष गरेर Rapid Eye Movement (REM) sleep (निद्रा) को स्थितिमा देखिन्छ । सपना विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जस्तै डरलाग्दो, साहसिक, रमाइलो वा यौनसम्बन्धी । यस्तो REM को स्थितिमा यौनाङ्गमा रगत भरिन्छ र पुरुषको लिङ्ग उत्तेजित अनि महिलामा योनिश्राव भएको पाइन्छ ।